China SOC နှင့်လက်ကိုင်တွင် 36V 40Ah LiFePO4 ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ဘမ်ပါကားထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူအတွက် | LIAO
လက်ကိုင်နှင့် SOC 36V 40Ah LiFePO နှင့်အတူ ၁4 ဘမ်ပါတ်ခ်အတွက် batteyr pack ။
2. မြင့်မားသောစွန့်ပစ်လက်ရှိ: max ကိုစီးဆင်းမှုလက်ရှိ 2C ဖြစ်သော 80A ဖြစ်နိုင်သည်။
အမည်ခံစွမ်းရည် 40 အာ့
မက်စ် စဉ်ဆက်မပြတ်တာဝန်ခံလက်ရှိ 80A
မက်စ် စဉ်ဆက်မပြတ်ရိနာစွဲလက်ရှိ 80A
အလေးချိန် ၂၀ ကီလိုဂရမ်လောက်
အတိုင်းအတာ 305mm * 168mm * 230mm
3. SOC နှင့်လက်ကိုင်သတ္တုထည်။
(၄) သက်တမ်းကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီဆဲလ်တွင် ၂၀၀၀ ကျော်သံသရာရှိပြီးခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ၏ ၇ ဆဖြစ်သည်။
၅။ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန် - ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ၏ ၁/၃ အလေးချိန်သာရှိသည်။
၆။ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည် - LiFePO4 စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောအလုံခြုံဆုံး lithium battery အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
၇။ စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင် - ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ဘက်ထရီဘမ်ပါကားသည်အထူး site configuration များမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ အားသွင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ အထွေထွေပစ္စည်းများမှာ - ကိုယ်ထည်ကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပြင်ဘက်အခွံကိုဖန်ထည်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဘမ်ပါကားဘက်ထရီ - တစ်ချိန်တည်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဖန်ထည်အားဖြည့်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးသံအစိတ်အပိုင်းတွေကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန်းဖြန်းပေးပြီးဖုတ်ထားပြီးအဆင့်မြင့်အသံ၊ နေရာချထားခြင်း၊ အလင်းရောင်၊ အချိန်ကိုက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်များ၊ ရောင်စုံ၊ ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ ဝတ္ထုစတိုင်၊ ကောင်းမွန်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နေရာကျယ်ပြန့်မှုစသောလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်နှင့်ကလေးများအတွက်အပန်းဖြေနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ လုံခြုံမှု၊ အဆင်ပြေမှု၊ အမြန်နှုန်းနှင့်အခြားသောဘမ်ပါသည့်အခြားအချက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရဘမ်ပါကားများကို Tiandi.com မှခွဲခြားနိုင်သည်။ Tiandi.com သည်ဘမ်ပါကားများနှင့်ဘက်ထရီဘမ်ပါကားများ။ ဤအမျိုးအစားနှစ်ခုအနက်မှ၎င်းတို့သည်ဘက်ထရီဘမ်ပါကားများ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှုနယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ရှေ့သို့ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသောအရည်အသွေး 24V 60Ah LiFePO4 AGV အတွက်ဘက်ထရီ
နောက်တစ်ခု: Built-in charger နှင့် SOC တို့ပါ ၀ င်သော Caravan မောင်းနှင်မှု LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 ဘက်ထရီ